ပုဂ္ဂလိက လွှဲပြောင်းမှုက ပြည်သူတွေအတွက် ကောင်းကျိုးလား ဆိုးကျိုးလား? - DVB TV News
Posted by DVB on June 15, 2017 in DVB Debate, အပတ်စဉ်ကဏ္ဍ
DVB Biz Debate – ပုဂ္ဂလိက လွှဲပြောင်းမှုက ပြည်သူတွေအတွက် ကောင်းကျိုးလား ဆိုးကျိုးလား?
“အရေးယူတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာ သူတို့ ပြောကြပါတယ်။စာချုပ်ချုပ်ပြီးပြီ ။ပြင်လို့မရတော့ဘူး လုပ်လို့မရ တော့ဘူး။ဒါကအားလုံးသဘောတူထား တာ။ကျွန်တော်မငြင်းပါဘူး။သို့သော် ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်တွေဘယ်လောက် အထိတရားဝင်လဲ။ဘယ်လောက်အထိဥပဒေအရဘောင်ထဲ မှာရှိသလဲ။ တိုင်းပြည်က တကယ်နစ်နာတယ်။စက်ရုံကြီးတွေ အကြီးကြီးတွေယူပြီး ဘာမှလဲမလုပ်ဘူး။ ထုတ်လုပ်မှုလဲမတက်ဘူး။ ဒီလိုဈေးခေါ်ရောင်းတဲ့ပုံစံ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်ကိုပြန် review လုပ်နိုင်တဲ့ဥပဒေ ရှိပါတယ်”
– ဦးအေးလွင်(ဗဟိုစီးပွားရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
“တချို့လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ Privatizationလုပ်ရမယ်။တချို့လုပ်ငန်းတွေ ကိုတော့ commercial ပုံစံလုပ်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာခက် တဲ့ပြဿနာက အစိုးရအဖွဲ့ကြီးတွေမှာလုပ်တဲ့လူဟာ သူက စီးပွားရေး လည်းလုပ်တယ်။တဖန်သူက Regulator ပြန်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့ အစိုးရမှာ Knowledge ရှိဖို့ လိုတာပေါ့”
– ဦးကျော်မျိုးထွန်း(Financial consultant)
“နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေကို ပုဂ္ဂလိကလွှဲပြောင်းတဲ့နေရာမှာ အစိုးရက နည်းလမ်း ၃ခုနဲ့သွားပါတယ်။တစ်အချက်က ဒီအလုပ်သမားတွေကို လျှော်ကြေးပင်စင်ပေးပြီးတော့ အငြိမ်းစား ယူခိုင်းတာ။ဒုတိယကတော့ လျှော်ကြေးပင်စင်ပေးပြီးတော့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာ ပြန်လည် ထည့်သွင်းတာ။နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ ဌာနဆိုင်ရာရွှေ့လိုက် တာ။ဒီနေရာမှာ အလုပ်သမားတွေ အတွက်အခက်အခဲမဖြစ်အောင် အစိုးရကဘယ်လိုထည့်သွင်းဖြေရှင်းသင့်သလဲဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်”
“နိုင်ငံတော်ပိုင်ဟိုတယ်တွေကို ပုဂ္ဂလိကထံလွှဲပြောင်းပေးတုန်းက ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ဈေးပြိုင်စနစ်နဲ့ နန်းမြိုင်ဟိုတယ်ကို ရယူခဲ့တာပါ။ဟိုတယ်က အခန်း ၃၀၂ ခန်းရှိပြီး မြေ ၁၅ ဧကရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က မြေဧက ၁၅ ဧကပေါ်မှာ tourism web တခုတည်ဆောက်မယ် ဆိုပြီး proposal တင်သွင်းခဲ့ပြီး စာချုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ကိုင်ခွင့် မရခဲ့ဘူး။ အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပါတယ်။အဲ့ဒါ အခု Review လုပ်ဖို့ဆိုပြီး စီးကော်ကိုတွင်သွင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်”
“Privatization မလုပ်ခင်မှာ corporatization ဆိုတာ တခုရှိပါသေး တယ်။ဒီ corporatization ဆိုတဲ့ သဘောက အစိုးရပိုင်လုပ်ငန်းတွေကို ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတခုလိုမျိုးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။တချို့လုပ်ငန်း တွေဟာ အမြတ်ရှိတဲ့အချိန်မှာ အမြတ်တခုလုံးကိုအစိုးရကို ပြန်ပေးရတယ်။ အဲ့ဒီအမြတ်ကို သိမ်းထား ပြီးလုပ်ငန်းတွေမှာထပ်တိုးချဲ့မယ် ပြီးရင် အစိုးရကို shareholder အနေနဲ့ကြည့်ပြီး အမြတ်ဝေစု အနေနဲ့ ခွဲပေးမယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီပိုင်အနေနဲ့အစိုးရ လုပ်ငန်းတွေကို သေချာ cooperate government ကောင်းကောင်း နဲ့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတော့မှ ဒုတိယအဆင့်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေ ကို Privatization လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်”
– ဒေါက်တာအောင်သူရ (CEO, Thura Swiss Co. Ltd)
DVB TV – 15.06.2017
ဖမ်းဆီးမိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် စားသုံးရန်မသင့်တဲ့ စားကုန်များကုို ဖျက်ဆီး
849 April 7, 2018
1380 April 2, 2018
963 October 30, 2017
6117 October 27, 2017
3608 October 20, 2017
3443 October 20, 2017